Gumiguru mwedzi mutema weSpanish stock market | Ehupfumi Zvemari
Gumiguru mwedzi mutema kumusika wekuSpain wemusika
Gumiguru yave zvakare iri mwedzi mutema yemisika yemari muSpain. Mushure mekusvika iwo madiki egore kubva 2006, mumatanho e 8.800 points uye ndapedza kukwidziridzwa kwemakore mazhinji apfuura. Mumazuva emwedzi uno wakaoma, makambani ese akanyorwa mubenchmark index, iyo Ibex 35, asiya mabhiriyoni mukukoshesa makambani avo. Mune imwe yenguva dzakaipisisa kubva dambudziko remari rapera muna 2007.
Kune zvikonzero zvakawanda zvinotsanangudza mashandiro emusika weSpanish wemusika uye kuti sehuwandu hwakatungamira kumatunhu azvino ekutengesa kusvika. Kwete chete nekuda kwematambudziko epasi rese ehupfumi, asiwo nekuda kwezviitiko zvemumba. Iko kukosha kweiyo kubhengi nemagetsi chikamu ndivo vaive vatadzi vakaipisisa kubva pamwedzi mutema uyu pamusika wemasheya. Nekudzikira kwechikamu padyo ne5%. Mune imwe yemwedzi ine rima kune ese maviri masiteki emakesi zvikamu zvemakore mazhinji.
Chero zvazvingaitika, kubva ikozvino zvichienda mberi tichaenda kuona izvo zvikonzero nei nyika nyika dzakazvibata nenzira iyi. Ehezve, pane tsananguro zhinji dzinofanirwa kuongororwa kuti tinzwisise zvakaitika mumisika yezvemari munguva ino. Saka kuti nenzira iyi, iwe unogona kuvandudza yako zano rekudyara inoshanda zvakanyanya. Kutarisira kuchengetedza iyo fenicha yekupera kwegore mugore umo iyo Ibex 35 yadonhedza kupfuura 10%.
1 Nhema Gumiguru yemabhangi
2 Reaction kune zvakapfuura kukwikwidza
3 Kuderera muhupfumi
4 Kubatsirwa kuderedzwa
Nhema Gumiguru yemabhangi
Mabhangi anga ari mamwe ematunhu akanyanya kubata panguva iyi. Mariri yakatamba iyo Dare Repamusorosoro rapa mutongo pakudzoka kwemamwe makomisheni kune vashandisi. Nemadonhwe ari pamusoro pe5% mumapoka ese emari mune pfupi pfupi nzvimbo yenguva. Izvo zvakakonzerawo matambudziko ari kugadzirwa mukati meEuropean Union, kunyanya kusagadzikana nehurumende yeItaly. Vese vanoongorora zvemari vanotenda kuti zvakafanira kuti ugare kunze kwenzvimbo yezvemari nepo kusagadzikana kuchiripo.
Kune rimwe divi, makambani emagetsi anga ari mumwe weakanyanya kubatwa neiyi kutengesa tsika mumwedzi waGumiguru. Mune ino kesi, yakatorwa kubva pakuti ivo vanga vari pasi pemitero yakawanda pane yavo purofiti mumatanho anoitwa nehurumende iripo mukuvandudza mabhajeti ehurumende. Chinhu chinozovatungamira deredza purofiti yako yebhizinesi. Zvino isu tichafanirwa kumirira kuti ndeipi resolution iyo inotorwa nevatongi pachiitiko ichi muzvikwereti zvemamogeji.
Reaction kune zvakapfuura kukwikwidza
Chimwe chikonzero chekutsanangudza uyu mutema mwedzi wemusika wekutengesa unobva kuchokwadi chekuti pakange pasina kwakanyanya kugadziriswa kune iyo inomuka mumakore achangopfuura. Uye semhedzisiro yeiyi stock market zviitiko, pakange pasina kuve nekugadziriswa mukugovera uye kudiwa mumutengo wezvikamu. Kubva pane ino maonero, sekureva kwevamwe vaongorori, uku kudonha kwemitengo kunogona kungoitika nekuda kwekuchekwa-kamwe chete kunogona kugara kwemamwe mavhiki mashoma. Zvichienderana nekukanganisika kunogona kuitika kwezvitsigiso zvehumwe kukosha.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti misika yemasheya haina kana madonhwe akakosha kubvira 2014. Uye inguva yekugadzirisa mamiriro yakawandisa kuratidza maSpanish equities. Kunyangwe mune ino kesi yakakanganiswa nhevedzano yakazara yenhau dzakanaka kwazvo kumisika yezvemari. Chero zvazvingaitika, inogadzirwa pasi pekuti ivo havana kutarisirwa nevadiki vepakati nepakati. Chinhu chakanyanya kukosha kubva ikozvino zvichave marongero egore rinosarudzwa pamusika wemasheya wenyika achapedza sei gore. Ichaisa toni ye chisarudzo kuti varimari vanozotora kwegore rinouya.
Hapana mubvunzo kuti chiitiko ichi chave nezvakawanda zvine chekuita nekudzikira kwakaitika muhuwandu mumazuva ano aGumiguru. Izvi zvinotsanangurwa nenyaya yekuti chikamu chakanaka chemishumo yehupfumi chakagadzirirwa nemasangano epasirese akakosha chakasimbisa zvishoma kudzikira mukutarisira kwekukura kwemakore mashoma anotevera. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyo data kubva kuNational Institute of Statistics (INE) kuburikidza nechinongedzo chinotungamira cheQuarterly National Accounts inoenderana nekota yechipiri inoratidza kuti iyo yakazara Spanish chigadzirwa (GDP) yakura ne0,6% mu yechipiri trimester. Iyi data ndeyegumi zvishoma zvichienzaniswa nenguva yapfuura.
Kune rimwe divi, kuverenga kwazvino kweiyo yakasanganiswa indekisi yezviratidzo zvinotungamira ine data rinoburitsa pane ino maitiro. Nekuratidzira yakaderera chikamu chemakore mashanu apfuura mune maitiro eiyo zvemari, kusvika padanho rekuti rinounganidza matanhatu akateedzana kudonha kwemwedzi pamwedzi. Muchiitiko cheSpain, yaenda kumapoinzi makumi mapfumbamwe neshanu nemakumi mashanu nemaviri kubva pamanhamba ekutanga e99,52 mapoinzi. Chinhu chinoratidza kumwe kuzorora mukukura kwehupfumi hweSpanish.
Uye zvingave zvishoma sei, misika yemari yakadzikisira fungidziro idzi kubva pamitengo yemakambani anotengeswa neruzhinji. Chaizvo mumwedzi wakaita Gumiguru ndiko kunonyanya kunetseka kune urwu rudzi rwe macroeconomic kuongorora. Nekuti zvese zvakare zvinoita sekuratidza kuti maitiro aya anoenderera mberi, zvirinani mumwedzi iri kuuya kana makota. Kufungisisa nezvekukosheswa kwemasheya sezvo vatyairi vachitya kuti pachave nekumira kwehupfumi kwakakosha kubva ikozvino. Kunyangwe nekucheka mune purofiti yemakambani anotengesa pachena.
Kunyangwe hazvo Gumiguru iri tsika pamwedzi kumusika wemasheya epasi rose, mumakore mashoma kukosheswa kwemasheya kwakadzikira senge mune ino 2018. Kumatanho asingafungidzike mazuva makumi matatu apfuura uye kuti chero zvodii zvakakonzera kurasikirwa kwakawanda kudiki uye varimi vepakati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Gumiguru mwedzi mutema kumusika wekuSpain wemusika
Kiredhiti kuchadhura muna 2019